Global Voices teny Malagasy » Fifidianana filoham-pirenena tany Taiwan: Voafidy indray i Tsai Ing-wen niaraka tamin’ny isam-bato betsaka indrindra azo hatramin’izay · Global Voices teny Malagasy » Print
Fifidianana filoham-pirenena tany Taiwan: Voafidy indray i Tsai Ing-wen niaraka tamin'ny isam-bato betsaka indrindra azo hatramin'izay
Voadika ny 23 Janoary 2020 4:55 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Taiwan (ROC), Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Pikantsary avy amin'ny lahatsary mivantana tamin'ny lahateny nataon'i Tsai Ing-wen tamin'ny fendreseny.
Nosoratan'i Pei-ju Teng ny lahatsoratra tany am-boalohany ary navoaka  tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 11 Janoary 2020. Naverina navoaka eto amin'ny Global Voices eo ambany fifanarahana fifampizarana votoaty ity dikan-dahatsoratra manaraka ity.
Nandresy lavitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny isam-bato miisa 8,1 tapitrisa izay betsaka indrindra hatramin'izay tany Taiwan ilay filoha nibata ny fandresena, Tsai Ing-wen, manoloana ilay mpifaninana aminy mpanohana an'i Beijing, Han Kuo-yu.
“Nampisehoan'i Taiwan an'izao tontolo izao ny fanaovantsika ho zava-dehibe ny fomba fiainantsika malalaka sy demaokratika,” hoy i Tsai nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 9 ora alina tamin'ny Asabotsy 11 Janoary 2020 izay nanamafisany ny fandreseny.
Nihorakoraka ny vahoaka mpankafy mpanohana teo ivelan'ny foiben'ny Antoko Liam-pandrosoana Demaokratika (DPP) tao Taipei rehefa niseho teo ambony sehatra hiresaka tamin'ireo mpanao gazety i Tsai.
Nahazo elanelam-bato betsaka lavitra noho i Han mpifaninana aminy avy ao amin'ny antoko Kuomintang i Tsai taorian'ny nikatonan'ny fifidianana tamin'ny 4 ora tolakandro ny Asabotsy.
Nampiseho ny valim-pifidianana farany fa nahazo isam-bato miisa 8,17 tapitrisa i Tsai na 57 isanjaton'ny vato. Ary nahazo vato miisa 5,52 tapitrisa kosa i Han na 39 isanjato.
Isambato azon'ny kandidà telo mpifaninana. Avy tamin'ny kaontin'ny HKFP Twitter.
Maherin'ny 14 tapitrisa ny olona nifidy, 74,1 isanjato izany ny taham-pahavitrihana, ary mihoatra 8 isanjato eo ho eo raha oharina tamin'ny taona 2016, saingy ambany noho ny fifidianana demaokratika tany Taiwan taloha.
Tamin'ireo sezan'ny antenimiera miisa 113, nitazona ny isa betsaka indrindra ny Antokon'ny Fampandrosoana Demaokratika nahazo toerana 61, saingy somary nihena kely raha oharina ny tamin'ny taona 2016 izay nahazoany toerana miisa 68. Nanatombo telo ny seza azon'ny Kuomintang izay 35 lasa 38.
Tao anatin'ny fanamarihany voalohany, nisaotra ny mpanohana azy i Tsai ary nanentana azy ireo mba hanisaka eny antsisiny ny tsy fitovian'izy ireo ara-politika hahafahana mampiditra ireo mpanohitra ho “eo ambanin'ny fanevan'ny demaokrasia”:
Mbola manao antso amin'ny manampahefana ao Beijing indray aho hampahatsiahy azy ireo fa ny fandriampahalemana, ny fangaraharahana, ny demaokrasia ary ny fifanakalozan-kevitra no lakilen'ny fifandraisana ara-politika miabo sy ny fampandrosoana maharitra. Manantena ihany koa aho ny hahatsapan'ny manampahefana ao Beijing fa tsy handefitra amin'ny fandrahonana sy ny fampitahorana i Taiwan demaokratika sy ny governemanta voafidy tamin'ny fomba demaokratika.
Tamin'ny 8:45 hariva, nanambara ny fahareseny tao Kaohsiung – izay maha-ben'ny tanàna azy – i Han nanoloana ireo mpanohana marobe izay naneho ny fahadisoam-panantenan'izy ireo tamin'ny faharesen'ilay kandidà ankafizin'izy ireo tamin'ny fifidianana.
“Efa niantso an-telefonina ny filoha Tsai Ing-wen aho, hiarahaba azy [tamin'ny fandreseny],” hoy i Han tamin'ireo mpanohana azy. Nanampy izy fa tsy ampy ny ezaka nataony tamin'ny fanentanam-pifidianana ka tsy nahavaly ny zavatra nandrasan'ireo mpanohana azy.
Nilaza i Han fa hiverina any amin'ny biraon'ny monisipaly ao Kaohsiung izy ny alatsinainy hoavy hanohy ny andraikiny amin'ny maha Ben'ny tanàna azy. Na izany aza, miatrika ny fanangonan-tsonia nataon'ireo vondrona sivily sy ny antoko manohana ny fahaleovantena Taiwan State-building izay mitaky ny fialany tamin'ny volana Desambra lasa teo izy.
Noho ity faharesena tamin'ny fifidianana ity dia nanambara  ny fametraham-pialana faobe ny filohan'ny KMT Wu Den-yih miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ambony KMT miisa 11, anisan'izany ny filoha lefitra sy ny sekretera jeneraly amin'ny fivorian'ny Komitin'ny Antoko Foibe amin'ny herinandro hoavy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/01/23/146534/